Soosaaraha Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Anteli
Dib loo cusbooneysiiyey Silicon Carbide budada Micro
Ridaya iyo Extrusion Reaction Cagaaran silsilad ...
Xaashida caddaynta rasaasta
silsiladda carbide tubbada dhalaalaysa iyo kuleylka kuleylka
Silicon carbide crucibles waa nooc ka mid ah weelka dhoobada qoto dheer ee nooca dhoobada. Haddii ay adag tahay in lagu kululeeyo dabka weyn, waa in la isticmaalaa shey lagu shiido. Mashiinka loo yaqaan 'Silicon carbide' ayaa si fiican u adkeysan kara heerkulka sare marka loo eego weelka dhalada ah, walxaha ku jira dhalada lagu shubayna waa inaysan aad u buuxsami doonin, si looga hortago waxyaabaha kululaanaya ee ka boodaya isla markaana u oggolaanaya hawo inay si bilaash ah u soo gasho falcelinta qiiqa. Sababtoo ah salka dhagxaanta waa mid aad u yar, mashiinka guud ahaan wuxuu u baahan yahay inuu ku istaago saddexagal saddex geesood ah si toos ah loogu kululeeyo dabka.
Qalab lagu dhejin karo waxaa lagu dhejin karaa saddex-xagal bir ah si qumman ama qaab jaantus ah, waxaana laguu diyaarin karaa kaligaa iyadoo kuxiran baahiyaha tijaabada. Kulaylka ka dib, dhagxaanta waa inaan isla markiiba la saarin miis bir ah oo qabow, si looga hortago inuu dillaaco qabow fiiqan awgiis, sidoo kale isla markiiba laguma dhejin doono miis alwaax ah, si looga hortago gubashada miisaska ama inuu dab kaco.
Silibladaha loo yaqaan 'Silicon carbide crucibles' waxaa inta badan loo adeegsadaa birta, daarista, mashiinada, kiimikada iyo qeybaha kale ee warshadaha, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa in lagu dhalaaliyo birta qalabka isku darsanta iyo isku darka biraha iyo aaladaha aan fiicnayn, iyo saameynta farsamo iyo dhaqaale waa wanaagsan tahay.
Waxay leedahay habsami u socodka kuleylka iyo u adkeysiga heerkulka sare. In geeddi-socodka isticmaalka heerkulka sare, isuduwaha balaarinta kuleylka waa yar yahay, waxayna leedahay iska caabin culeys gaar ah oo kuleylka degdega ah iyo qaboojinta degdegga ah.
Waxay leedahay iska caabin daxal oo xoog leh ee aashitada iyo xalka alkaline iyo xasiloonida kiimikada oo aad u fiican.
Marka loo barbardhigo garaafka garaafka, silsiladda carbide-ka loo yaqaan 'silicon carbide' waxay leedahay astaamaha cufnaanta mugga weyn, caabbinta heerkulka sare, wareejinta kuleylka degdegga ah, aashitada iyo caabbinta alkali, xoogga heerkulka sare iyo caabbinta qiiqa sare.
Nolosha adeeggu waa 3-5 jeer ka dheer dhejiska garaafka jajaban.
Hore: Biiyaha gubi
Xiga: Xidho Gacmo-gashi Tube
Xidho Gacmo-gashi Tube
Daarista iyo Extrusion Falcelinta Cagaaran ee Lagu Xidhay Sil ...